PowerChord: Fitantanana mpitarika eo an-toerana afovoany sy fizarana ho an'ny marika zaraina amin'ny mpivarotra | Martech Zone
Arakaraka ny mahazo marika lehibe kokoa, ny ampahany mihetsika kokoa no miseho. Ny marika amidy amin'ny tambajotran'ny mpivarotra eo an-toerana dia manana tanjona ara-barotra, laharam-pahamehana ary traikefa an-tserasera sarotra kokoa hodinihina - manomboka amin'ny fomba fijery marika ka hatrany amin'ny sehatra eo an-toerana.
Marika te ho mora hita sy hovidina. Ny mpivarotra dia maniry fitarihana vaovao, fifamoivoizana an-tongotra bebe kokoa, ary fitomboan'ny varotra. Ny mpanjifa dia mila fanangonam-baovao tsy misy korontana sy traikefa amin'ny fividianana - ary tadiaviny haingana izany.
Mety ho levona ao anatin'ny indray mipi-maso ny fitarihana fivarotana mety.
Raha mahatratra dimy minitra mifanohitra amin'ny 30 minitra ny mpivarotra iray, dia mitombo avo 100 heny ny mety hisian'ny fifandraisana mivantana. Ary ny vintana amin'ny fitarihana mifandray ao anatin'ny dimy minitra dia mitsambikina in-21.
Ny olana dia ny lalana hividianana dia mahalana haingana na tsy misy korontana ho an'ny vokatra amidin'ny mpivarotra. Inona no mitranga rehefa miala amin'ny tranokalan'ny marika voarindra tsara ny mpanjifa iray mba hanadihady ny toerana hividianana eo an-toerana? Niova fo ve izany firaka izany sa nanangona vovoka tao anaty boaty fidirana? Haingana ve no nitrangan'ny fanarahan-dia — raha sanatria?
Lalana izay miantehitra amin'ny antontan-taratasy mivaingana sy ireo dingana tsy mifanaraka. Lalana feno fahafahana very ho an'ny mpandray anjara rehetra izany.
Ary ovaina amin'ny alàlan'ny automatique rindrambaiko izany.
PowerChord dia vahaolana SaaS ho an'ny marika amidy mpivarotra manokana amin'ny fitantanana sy fizarana fitarihana eo an-toerana. Ny sehatra afovoany dia manambatra ny fitaovana CRM matanjaka indrindra sy ny asa fanaovana tatitra mba hampitomboana ny fitarihana eo amin'ny sehatra eo an-toerana amin'ny alàlan'ny automation, ny hafainganam-pandeha ary ny fanadihadiana. Amin'ny farany, PowerChord dia manampy ireo marika hanorina fifandraisana amin'ny mpanjifany manomboka amin'ny tambajotran'ny mpivarotra azy, ka tsy misy fitarihana mandeha.
Powerchord Lead Fitantanana sy fizarana
Ny marika sy ny mpivarotra dia samy afaka mampiasa ny PowerChord's Ivotoerana baiko. Amin'ny alàlan'ny Command Center, ny marika dia afaka mizara ho azy ireo fitarihana - na avy aiza na avy aiza izy ireo - amin'ny mpivarotra eo an-toerana.
Ny mpivarotra dia omena fahefana hamadika ireo fitarihana ireo ho varotra. Ny mpivarotra tsirairay dia manana fahafahana miditra amin'ny fitaovan'ny fitantanam-pitantanana hitantana ny lalan-tsarobidy eo an-toerana. Ny mpiasa rehetra ao amin'ny mpivarotra dia afaka mahazo fampahalalana momba ny fitarihana mba hanafaingana ny fifandraisana voalohany ary hampitombo ny mety hisian'ny fivarotana. Rehefa mandroso amin'ny lalan'ny varotra ny mpivarotra dia afaka manampy naoty ny mpivarotra mba hijanonan'ny rehetra amin'ny pejy iray ihany.
Ny tatitra momba ny fitarihana eo an-toerana dia miodina mankany amin'ny marika mba hahafahan'ny mpitarika ny varotra manara-maso mora foana ny fandrosoana amin'ny toerana rehetra.
Satria ny fifandraisana haingana dia fanalahidy amin'ny fanakatonana fivarotana, ny sehatra PowerChord manontolo dia manao laharam-pahamehana ny hafainganam-pandeha. Ny marika sy ny mpivarotra dia ampandrenesina momba ny fitarihana vaovao eo no ho eo — ao anatin'izany ny SMS. Mety ho fanampiana lehibe ho an'ny mpiasan'ny mpivarotra eo an-toerana izay tsy mifatotra amin'ny birao sy solosaina mandritra ny andro. PowerChord vao haingana ihany koa dia namoaka One Click Actions, endri-javatra ahafahan'ny mpampiasa manavao ny satan'ny mpitarika ao anatin'ny mailaka fampandrenesana nefa tsy mila miditra ao amin'ny Command Center.
Powerchord Analytics sy tatitra
PowerChord dia mametraka ny tatitra amin'ny fanatsarana ny ezaka varotra eo an-toerana. Afaka mijery ny fifandraisan'ny mpitari-dalana eo an-toerana izy ireo — ao anatin'izany ny click-to-call, ny kitiho ho an'ny toro-lalana, ary ny fandefasana ny endrika fitarihana — amin'ny toerana iray ary mijery ny fironan'izy ireo rehefa mandeha ny fotoana. Ny dashboard ihany koa dia ahafahan'ny mpivarotra mandrefy ny fironan'ny fivarotana eo an-toerana, toy ny vokatra tsara indrindra, pejy, ary CTA, ary manombana ny fotoana vaovao hiova finoana.
Amin'ny alàlan'ny default, mihodinkodina ny tatitra - izany hoe ny mpivarotra tsirairay dia tsy mahita afa-tsy ny angonany, ny mpitantana dia afaka mahita ny angona amin'ny toerana tsirairay izay iandraiketany, hatrany amin'ny fijery manerantany azon'ilay marika. Ny fahazoan-dàlana dia azo amboarina mba hamerana ny fidirana amin'ity data ity raha ilaina.
Ireo mpivarotra marika dia afaka mahazo fahatakarana ihany koa ny fomba fiasan'ny fanentanana ara-barotra eo an-toerana, ao anatin'izany ny vidin'ny resaka, ny kitika, ny fiovam-po ary ny tanjona hafa. Ny fampiasa PowerChord Analytics and Reporting dia mampifandray ireo teboka eo amin'ny fitarihana sy ny fidiram-bola, ahafahan'ny marika miteny hoe:
Ny ezaka ara-barotra nomerika nataonay niaraka tamin'ny ezaka fitantanana sy fitsinjarana fitarihana anay dia nitondra vola $50,000; Ny 30% amin'izany dia niova ho varotra, niteraka 1,000 nitarika tamin'ny volana lasa.
Mampiray izany rehetra izany: Grasshopper Mowers dia mampiasa PowerChord hanatsarana ny tranokalan'ny mpivarotra eo an-toerana ary hampitombo ny fitarihana 500%
Mpikapa valala dia mpanamboatra milina fanasan-damba ara-barotra amidy manokana amin'ny alàlan'ny tambajotra misy mpivarotra tsy miankina 1000 eo ho eo manerana ny firenena. Fantatry ny orinasa fa misy ny fahafahana hisarihana mpanjifa vaovao sy hampitombo ny anjara tsenany. Teo am-pelatanan’ireo mpivarotra teny an-toerana izany fahafahana izany.
Teo aloha, rehefa nandinika ny tsipika vokatra tao amin'ny tranokala Grasshopper ny mety ho mpanjifa, dia nihena ny fahafaha-mivarotra rehefa nitsidika ny tranokalan'ny mpivarotra eo an-toerana. Nanjavona ny marika Grasshopper, ary nasehon'ny tranokalan'ny mpivarotra ny zotram-pitaovana mifaninana izay tsy ampy fampahalalana momba ny fivarotana eo an-toerana, ka niteraka fisavoritahana ny mpanjifa. Vokany, tsy hitan’ny mpivarotra intsony ny lohan’izy ireo naloany ka sahirana tamin’ny fanakatonana ny varotra.
Nandritra ny enim-bolana, Grasshopper dia niara-niasa tamin'ny PowerChord mba hanatsara ny diany mankany an-toerana amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fitarihana, ny famoronana marika nomerika, ny fampiharana ny automatique ary ny fanohanana ny ezaka ataon'ny mpivarotra eny an-tsena. Ny Grasshopper dia nampitombo 500% ny fitarihana ary 80% ny varotra vokarina amin'ny Internet tamin'ny taona voalohany.
Ampidino eto ny fandalinana tranga feno
Nahazo ny Lead ianao. Inona izao?
Ny iray amin'ireo fanamby atrehin'ny orinasa dia ny mamadika ny fitarihana ho varotra. Ny dolara ara-barotra lehibe dia lany amin'ny fisarihana ny mpanjifa. Fa raha tsy manana rafitra napetraka ianao hamaliana ny fitarihana novokarinao, dia very maina ny dolara. Ny fikarohana dia mampiseho fa ny antsasaky ny fitarihana rehetra ihany no tena mifandray. Araraoty ny firoboroboan'ny tetika ara-barotrao amin'ny alalan'ny fampiharana ireo fomba fanao tsara indrindra amin'ny fitantanana fitarihana mba hisy fiantraikany lehibe amin'ny varotrao.
Valio ny Mpitarika rehetra - Izao no fotoana hizarana fampahalalana sarobidy momba ny vokatrao na serivisy ary manampy ny mpanjifa amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana. Izao ihany koa no fotoana mahafeno fepetra ho mpitarika sy hamaritana ny haavon'ny fahalianan'ny mpanjifa tsirairay. Ny fampiasana fifandraisana mifandraika sy manokana dia hampitombo ny fiovam-po.
Zava-dehibe ny valiny haingana - Rehefa mameno ny taratasin'ny fitarihana ny mpanjifa dia vonona ny hanao ny dingana manaraka amin'ny diany fividianana. Nanao fikarohana ampy izy ireo mba hahaliana ny vokatrao ary vonona ny hihaino anao. Araka ny InsideSales.com, ireo mpivarotra izay manara-maso ny fitarihana amin'ny tranonkala ao anatin'ny 5 minitra dia 9 heny no mety hanova azy ireo.
Manaova dingana fanaraha-maso – Zava-dehibe ny manana paikady voafaritra amin'ny fanarahana ny fitarihana. Tsy te ho diso fanantenana ianao raha tsy manaraka haingana na manadino tanteraka. Azonao atao ny mieritreritra ny hampiasa vola amin'ny CRM raha mbola tsy nanao izany ianao - amin'izany fomba izany dia azonao atao ny mitazona ny daty fanaraha-maso, ny fanamarihana amin'ny antsipiriany momba ny mpanjifa, ary ny hampifandray azy ireo amin'ny daty manaraka.
Ampidiro ao amin'ny paikadinao ireo mpiara-miombon'antoka fototra - Ho an'ny marika amidy amin'ny mpivarotra, ny fivarotana dia mitranga mivantana eo an-toerana. Midika izany fa ny mpivarotra eo an-toerana no teboka farany mifandray alohan'ny famaranana. Omeo hery ny tambajotran'ny mpivarotra anao amin'ny fitaovana hanampiana azy ireo hanakatona — na votoaty izay hahatonga azy ireo ho marani-tsaina kokoa amin'ny vokatrao na vahaolana mandeha ho azy mba hanampiana amin'ny fitantanana ny fitarihana sy ny fotoana famaliana.
‍Mahazoa loharano bebe kokoa ao amin'ny bilaogy PowerChord
Tags: mpivarotrampivarotra mpitarika analyticsfanadihadiana momba ny mpivarotraanalyse mpitarika mpivarotratatitra momba ny fitarihana mpivarotrampivarotravalalampikapa valalafitarihana firakafizarana firakafitantanana fitarihanapowerchord